Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Sida Loo kasbado Shahaadadaada Nomad Dijital ah
Socdaalka adduunka, ka shaqeynta laptop -kaaga, iyo kasbashada shahaadadaada waxaa loo samayn karaa wax aad uga yar intaad u malaynayso.
Dhaqanka reer guuraaga ee dhijitaalka ah ayaa malaayiin qof quluubtooda ku riyooday inay meesha ka saaraan xaaladda taagan oo ay jeexaan waddooyinkooda nolosha.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku barato Ingiriisiga Shiinaha ama aad ku quusto qorraxda hoosteeda Bali.
Meel kasta oo ah meesha aad ku riyoonayso, uma baahnid inaad kala doorato safarka iyo dhisidda xirfadda. Dhab ahaantii, labadooduba si fudud ayay u wada noolaan karaan iyagoo wada nool oo xitaa kaa caawinaya inaad si fudud u gaarto hab -nololeedkaaga.
Haddii aad xiisaynayso barashada sida loo noqdo reer guuraa dijital ah intaad dugsiga ku jirto, sii akhri.
Dooro Shahaado Fursado ku leh Shaqada Fog
Haddii aad rabto inaad noqoto reer guuraa dhijitaal ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato mid weyn oo ku siin doonta fursado shaqo oo dabacsan. Halkii aad ka dooran lahayd goob kugu xiri doonta shaqo xafiis 40 sano ee soo socota, ka fiirso warshado badan oo ku saleysan dijitaalka. Waxaad geli kartaa barnaamijyada, naqshadeynta webka, suuqgeynta dhijitaalka ah ama qorista. Xitaa waxaad ku kasban kartaa shahaadadaada waxbarashada si kor loogu qaado aqoonsigaaga barashada Ingiriisiga dibedda.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo dabacsan oo onlayn ah oo kaa caawin doona inaad sii joogto dugsiga intaad safraysid. Waxaad codsan kartaa a daynta ardayga gaarka ah si loo helo maaliyad wax lagu barto iyo kharashyada kale. Qaybta ugu fiican ee ku saabsan amaahda khaaska ah waa inaad xorriyad dheeraad ah u leedahay sida aad u isticmaasho lacagta aad amaahatay. Waxa kale oo jira fursado diyaarin lacag bixin oo aad ka faa'iidaysan karto qalin jabinta kadib.
Noqo mid la taaban karo
Waa inaad cagahaaga dhulka dhigtaa sida khiyaaligaaga ku saabsan ku noolaanshaha dibadda uu duulayo. Nolosha dibaddu way adkaan kartaa, waxaana jira caqabado badan oo maalin kasta ah oo ay tahay inaad ka gudubto sidii ajnabi. Laga soo bilaabo caqabadaha luuqadda illaa sicirka sarrifka lacagta, waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaad ku mashquusho shaqada iyo dugsiga sare. Waa inaad sidoo kale buuxisaa shuruudaha fiisaha ee meelaha safarkaaga sidoo kale. Habka ugu sahlan ee lagu galo waddamada badankood waa fiisada ardayga ama shaqada. Tani waxay noqon kartaa barista Ingiriisiga, noqoshada lamaanaha ama isku qoridda casharrada dugsiga luqadda inta aad ka helayso waxbarashada kulliyaddaada internetka.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si xor ah u safarto oo aad ugu noolaato meel kasta oo noloshu ku qaadato, laakiin taasi waxay ku gaarsiin kartaa ilaa hadda. Waxaad heli kartaa xorriyad aad uga badan sidii reer -guuraaga dhijitaalka ah, laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad yeelato himilooyin qeexan mustaqbalkaaga. Mid ka mid ah sababaha ugu waawayn ayaa ah in ka dib markii warwareegii hore bilaabmay inuu daciifiyo, waxaad isku arki doontaa guri -doon ama dareemid jihays la'aan. Adiga oo aan ogayn meesha aad rabto inaad tagto, way adkaan kartaa inaad dhaqaale ahaan ammaan ahaato.
Fiisooyinku way dhacayaan, oo qof doonaya inuu ku noolaado dalal badan wuxuu ku khasban yahay inuu waqti ku qaato waddankiisa inta u dhaxaysa fiisooyinka. Xaggee ku noolaan doontaa ku -meelgaarka ah? Maxaad samayn doontaa markaad rabto inaad xididdo xididdo yeelato? Ma ogtahay sida loo ilaaliyo gurigaaga intaad safrayso? Ujeeddadaada ugu dambeysa ma tahay inaad ku hesho dhalashada waddan shisheeye ama aad ku soo laabato guriga had iyo jeer inta u dhaxaysa safarada? Sidaad arki karto, tani waxay u baahan tahay qorshayn feker leh meel kasta oo aad tagto ama waxaad baratid.